Izindawo ezi-5 noma izikhumbuzo ezisongelwa ukuguquka kwesimo sezulu | Izindaba Zokuhamba
Izindawo ezi-5 noma izikhumbuzo ezisongelwa ukuguquka kwesimo sezulu
Ososayensi emhlabeni wonke babikezele ukuthi ngonyaka ka-2100 izinga lolwandle lingakhuphuka futhi lifake engcupheni izikhumbuzo ezahlukahlukene nezindawo ezivikelwe ezingxenyeni zomhlaba wonke kuze kube sezingeni lokucwiliswa.
Ngale ndlela, noma yiliphi idolobha elisogwini elinamagugu omlando olwandle kufanele lilungiselele ukulivikela ngoba izivunguvungu nokukhuphuka kwamanzi kuyingozi enkulu.
Yiziphi izindawo ezi-5 zabavakashi ezingathinteka ekushintsheni kwesimo sezulu?
2 Isifanekiso senkululeko
4 I-Isla de Pascua
5 Cartagena de Indiaas
EVenice amanzi ayakhuphuka futhi nezwe liyahamba, ngakho-ke amabika amabi asondela kuleli dolobha elihle lase-Italy. Futhi bakwenza ngokushesha okungalindelekile. Ifa elingavamile lomlando nobuciko elihlanganisa ubuciko be-Renaissance, i-Gothic, i-Byzantine ne-Baroque lingacwiliswa uma ukuqhubekela phambili kolwandle, olukhula phakathi kwamamilimitha amane kuya kwayisithupha ngonyaka, kungamiswa.
Kube nemizamo eminingana yokunqanda imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu kepha, okwamanje, imiphumela ayigculisi. Okunye ukubikezela, okungenathemba, kuxwayisa ukuthi iVenice iba sengcupheni yokucwiliswa eminyakeni engama-60 ezayo, ngokusho kombiko weZizwe Ezihlangene okhishwe yinhlangano yezemvelo yamazwe omhlaba iGreenpeace.
Yiba noma kanjani, konke kubonakala kukhombisa ukuthi ngolunye usuku idolobha lemisele, ama-gondola kanye nothando luzombozwa ngamanzi. Ngethemba ukuthi lowo mzuzu ukude kepha usuvele uyayibona imiphumela ye-acqua alta ePlaza de San Marcos. Prelude kokungenzeka kulo lonke idolobha ngekhulu noma ngaphansi.
Okumangazayo nokukhulu kumile iSitatimende Sokukhululeka emlonyeni woMfula i-Hudson eNew York, eLiberty Island eningizimu yeManhattan Island.
Ingesinye sezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zedolobha laseMelika kanye nophawu lwezwe, okwakuyisipho esivela eFrance ngo-1876 ngesikhathi sekhulunyaka lwenkululeko yaso.
Lesi sithombe, umsebenzi womqophi uFrédèric Bartholdi ngokubambisana nonjiniyela uGustave Eiffel, samukela izigidi zabavakashi eNew York kodwa ngokuzayo kungenzeka kungabi njalo uma ulwandle luqhubeka nokukhuphuka.
ISiphepho uSandy sabangela izikhukhula ezingamaphesenti angama-75 eLiberty Island ngo-Okthoba 2012. ngenxa yomonakalo omkhulu kwingqalasizinda yesiqhingi nezinsizakusebenza kulesi sivunguvungu.
Esinye sezikhumbuzo eziwubukhazikhazi e-UK yinkimbinkimbi ye-Stonehenge, ebuyela emuva ekhulwini lama-XNUMX BC. Insalela evela ku-Stone Age eye yahlala isikhathi eside kepha kungenzeka ukuthi ayizange imele isivivinyo sokushintsha kwesimo sezulu. I-UNESCO isanda kuxwayisa uhulumeni waseGreat Britain ngamathuba amakhulu okuthi uStonehenge azonyamalala esikhathini esifushane.
Ngokusho kocwaningo, ukwanda kwezimvula ezinkulu endaweni kanye nokufika kwezimvukuzane ezibalekela ezindaweni ezomile ngenxa yokuguguleka kogu kungaholela ekucekelweni phansi kwale ndawo ebalulekile yemikhosi etholakala cishe imizuzu eyishumi nanhlanu enyakatho yeSalisbury.
Leli tshe lesikhumbuzo elalakhiwe ngamabhulokhi amaningana amatshe laliyingxenye yesakhiwo esikhulu, esasihlanganisa imibuthano yamatshe nezindlela zemikhosi. Akukaziwa ukuthi yenziwa ngamuphi injongo uSthengehenge kodwa kukholakala ukuthi wasetshenziswa njengesikhumbuzo somngcwabo, ithempeli lenkolo noma indawo yokubuka izinkanyezi ukubikezela izinkathi zonyaka. I-Stonehenge, i-Avebury nezinye izindawo ezihlobene nazo zamenyezelwa njenge-UNESCO Heritage Heritage ngo-1986.
Isithombe seqembu lezithombe e-Easter Island
I-Isla de Pascua
I-Easter Island ingenye yezindawo ezinkulu zezivakashi eChile. Itholakala maphakathi noLwandlekazi iPacific khona ePolynesia, ingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zabavakashi ezweni laseLatin America ngamasiko angaqondakali wohlanga lwakwaRapanui, ubuhle bamasimu alo nezithombe ezinkulu ezibizwa nge-moai.
Ukuze kulondolozwe amagugu awo, uhulumeni waseChile uphethe iRapa Nui National Park ngeConaf, ngenkathi i-UNESCO imemezela ukuthi leli paki liyindawo eyigugu lomhlaba ngo-1995.
Naphezu kwayo yonke imizamo, ukuguquka kwesimo sezulu nakho kubeka ukongiwa kwe-Easter Island engcupheni. Kusukela ngo-1990, ukuguguleka kogu kuye kwanda, kwasongela izithombe ezibaziwe ze-monolithic ezingaphezu kweminyaka eyinkulungwane ubudala. Ngaphezu kwalokho, ukufudumala kwembulunga yonke kungenza iPaki inyamalale.
Cartagena de Indiaas
Etholakala enyakatho yeColombia, iCagagena de Indias ingelinye lamadolobha amahle kakhulu ezweni. Yasungulwa nguPedro de Heredia ngo-1533 futhi kuso sonke isikhathi samakoloni itheku lalo lalingenye yezinto ezibaluleke kakhulu eMelika, elalikhombisa ifa lobuciko namasiko edolobha.
Kepha njengamanye amadolobha noma izikhumbuzo zangaphambilini, iCartagena de Indias nayo isengozini yokucwiliswa ngenxa yokwenyuka kolwandle. Izifundo eziningi ziqinisekisa ukuthi ngonyaka ka-2040 izindawo zabavakashi zedolobha kanye netheku nezindawo zezimboni zizobe zithinteke kakhulu ngenxa yezimvula nezikhukhula ngenxa yesivuvujikelele somhlaba. Ukuzama ukulwa nayo, uhulumeni waseColombia wethule amaphrojekthi amaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izaziso » Izindawo ezi-5 noma izikhumbuzo ezisongelwa ukuguquka kwesimo sezulu
Amathiphu Wokugwema Ubuthi Bokudla Eholidini